Igumbi elineendawo ezijonge ulwandle Kufuphi neBrighton Seafront - I-Airbnb
Igumbi elineendawo ezijonge ulwandle Kufuphi neBrighton Seafront
Ihlala abantu abalala bodwa, okanye abantu abathandanayo abahlala ixesha elifutshane eCentral Brighton.
I-Gay Village isemazantsi kweenyawo zakho, ulwandle, izitrato ezimbini ezikude, embindini, uhamba imizuzu eyi-7. Izikolo ezininzi zolwimi ezikufuphi. Umbuki zindwendwe ngumfundisi wesiNgesi othatha umhlala-phantsi.
Le yiflethi entle yakudala ekwisitrato esineenqaba eziyi-60, eyenzelwe abantu abasebenzayo abaqhelekileyo. Le ndawo iyasetyenziswa ibe ayizukuzenzisa. Iflethi yam ibekwe ngendlela yale mihla ukuze kube lula ukuhlala kuyo, kufutshane nolwandle, embindini wedolophu nakwindawo ephakathi kwiGay Village.
Igumbi lokulala ligumbi elilala abantu ababini elinobukhulu obufanelekileyo. Kukho indawo yokuxhoma iimpahla nekhabhathi, idesika yokusebenzela kunye nesitulo sokuhlala kamnandi. Kukho iTV egumbini kwaye kukho umphezulu wophahla omhle kunye nolwandle ukusuka efestileni yegumbi lokulala.
4.84 · Izimvo eziyi-260
Le ndawo isembindini wedolophu ilungiselelwe izindlu zeendwendwe. Uninzi lwee-Gay Bars zilapha njengeevenkile ezininzi zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile kunye neevenkile ezinkulu. Ukuba yiMpuma yeSteine, yindawo ehlala abantu abaninzi ibe umphambili wolwandle kweli cala ledolophu uvulekile ngaphezu kokuba utyibilike phakathi kweebhotile. I-Posh ayikho njalo, kodwa iyakhuthaza, inobuhlobo kwaye ilungele ezona zinto zibhetele ezifumaneka kwi-Brighton.
Ngokuyintloko le yindawo yokuhlala ixesha elifutshane.. Kubalulekile kum ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho, enoba uneshedyuli enzima okanye ukuba ixesha lakho lingacwangciswanga kangako kwaye unexesha elingakumbi lokuncokola. Nceda ugcwalise iprofayile yakho ukuze ndibe nombono wakho ngaphambi kokuba ubhukishe.
Ngokuyintloko le yindawo yokuhlala ixesha elifutshane.. Kubalulekile kum ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho, enoba uneshedyuli enzima okanye ukuba ixesha lakho lingacwangciswanga kan…